IMacOS High Sierra inemodi emnyama efana ne-macOS 10.14 | Ngivela kwa-mac
IMacOS High Sierra inemodi emnyama efana ne-macOS 10.14
Kule mpelasonto sazi ngokuvuza kwesicelo, ezinye izici zesixhumi esibonakalayo se-macOS 10.14, kufaka phakathi imodi emnyama, Lokho kuzokwethulwa kithina ntambama engqungqutheleni yonjiniyela, esizokutshela ngayo kuSoy de Mac kusuka ngo-19pm CET eSpain.
Omele kakhulu lo oxhumana naye wokuqala kwakuyimodi yangempela yasebusuku kuyo yonke i-interface. Ngokushesha, Abathuthukisi baye emsebenzini ukuthola enye indlela yokwenza kusebenze le modi enguqulweni yamanje ye-macOS, High Sierra. Kubukeka sengathi ukusesha kunikeze imiphumela elindelekile.
Yize lo myalo wokugcina ungasebenzisi imodi emnyama ye-macOS 10.14, usikhombisa umbono wokuqala ngokuthi kuzoba njani ukusebenza usuku nosuku ngemodi yasebusuku yenziwe yasebenza. Kuzikrini ezilandelayo asinika zona kuTwitter UCorbin dunn, siyabona ukuthi kungaba njani ukusebenza nge-TextEdit kule modi esanda kudingwa.
Ukwenza lo msebenzi usebenze, kufanele senze kusebenze i-Terminal application bese sibhala ebhokisini lengxoxo:
Manje sesiyabona imodi emnyama kuhlelo lokusebenza lwe-TextEdit, kule modi emnyama kakhulu ebukeka kahle impela. Singasenza lesi senzo ngohlelo oluhlukile. Ngenxa yalokhu kufanele sishintshe igama /TextEdit.app/ngegama lesicelo esifuna ukusibona kumodi emnyama. Ngakolunye uhlangothi, okunye ukuhlolwa okwenziwe, ngokwesibonelo nge-Finder, akuveli kahle, ngoba kubonakala sengathi iMacOS ibuyele emuva eminyakeni engama-20.
Ukubuyela kumodi ezenzakalelayo, kudinga ukuqala kabusha ikhompyutha kuphela. Le misebenzi isetshenziselwa ukuhlanganyela isikhashana bese ucabanga ukuthi kuzoba njani ukusebenza emva kokumnyama, ukuqala ngoSepthemba, lapho sibona inguqulo yokugcina ye-macOS 10.14. Ngokwesinye isandla, Kungaba nengqondo ukuthi le modi emnyama ibonakale ku-beta ezokhishwa ekupheleni kweKeynote yanamhlanje ntambama.
Ezinye izici ezintsha ze-macOS 10.14 esizaziyo kule mpelasonto yilezi: Uhlelo lokusebenza lwezindaba kwe-macOS, noma kungaziwa ukuthi izotholakala ngamaphi amazwe, kanye negama elingaba khona lohlelo olusha lokusebenza lwe-Mac. Ideski libonakala liyihlane ebusuku ngakho-ke igama leMojave livela njengentandokazi yokubheja.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » IMacOS High Sierra inemodi emnyama efana ne-macOS 10.14
I-MacBook Pro engaziwa ivela kumabhentshimakhi
Qhubeka nethimba lika Ngivela kunkulumo eyisihluthulelo yanamuhla ye-Mac